Kaameradda 'Logitech's Circle 2' waxay la jaanqaadi doontaa Muuqaalka HomeKit Secure Video | Wararka IPhone
Kaamirooyinka amniga ayaa had iyo jeer ahaa Duckling fool xun, si aad si uun ugu wacdid, HomeKit, maaddaama ayan na siinin sifooyin la mid ah noocyada kale ee qalabka, shaqadooda darteed. Apple, wuu ogyahay xaaladaas, wuxuu doonayey inuu miiska garaaco iyo intii lagu jiray WWDC 2019 waxay ku dhawaaqday muuqaal cusub oo loogu talagalay kamaradaha amniga.
Apple wuxuu soo bandhigay Secure Video Homekit, oo ah nidaam kaydinta daruur oo loogu talagalay dhammaan duubista kamaradaha iswada. Apple ayaa diyaar noo ah 200 GB oo bilaash ah, oo aan ku keydin karno illaa 10 maalmood oo duubitaan ah, iyadoon qandaraas lagelin adeegyada kaydinta ee ay soosaarayaashu bixiyaan.
Mid ka mid ah saddexda shirkadood ee marka hore la jaan qaadi doona adeeggan bilaashka ah ee laga helay Apple waa Logitech, oo caan ku ah boodhadhka ciyaarta, jiirka iyo dhagaha. Sida aan ka akhrisan karno sawirka bulshada Logitech, lShirkaddu waxay ku andacooneysaa in HomeKit Secure Video la taageeri doono la socota Circle 2, oo ah kaamiro ilaalin ah oo sanadkii hore suuqa laga bilaabay oo aan ku falanqeynay Actualidad iPhone.
Taasi waa suurtagal mahadsanid cusbooneysiinta firmware ee shirkadda Faransiiska ay qorsheyneyso inay soo bandhigto kahor dhammaadka sanadka, waxay u badan tahay Sebtember / Oktoobar, oo noqon doonta markii nooca iOS 13 la soo saaro marka lagu daro inta ka hartay nidaamyada hawlgalka ee Mac, Apple Watch iyo Apple TV.
Si looga faa'iideysto fursaddan ay Apple na siiso, waa lagama maarmaan taas waxaan ku kireysanay 200 GB oo iCloud ah kamarad ahaan. Haddii tirada kamaraduhu yihiin 5, qorshaha keydinta waa inuu ahaadaa 2 TB.
Wareegga 'Logitech Circle 2' ayaa hadda qiimihiisu yahay € 144 oo ka socda shirkadda Amazon ee loogu talagalay nooca fiilada leh iyo 186 ee nooca Wi-Fi. Waxaan sidoo kale haynaa xirmo kaamirooyinka 2 wireless ah iyo batari dib loo soo celin karo oo ah 479 euro.
Goobaha Logitech 2 - Kaamirada Amniga Guryaha ee Gudaha ama Bannaanka
Goobaha loo yaqaan 'Logitech Circle 2' - Nidaamka Kaameradda Amniga Guriga ee wireless-ka ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Kaameradda 'Logitech's Circle 2' waxay la jaanqaadi doontaa Muuqaalka 'HomeKit Secure Video'